ကိုယ်ခံပညာ နဲ့ ဘောလုံးအားကစားကို တွဲဖက်သင်ကြားမယ့် ခါဘစ် နဲ့ ဆီးဒေါ့ဖ် တို့ရဲ့ သင်တန်းကျောင်း - xyznews.co
ကိုယ်ခံပညာ နဲ့ ဘောလုံးအားကစားကို တွဲဖက်သင်ကြားမယ့် ခါဘစ် နဲ့ ဆီးဒေါ့ဖ် တို့ရဲ့ သင်တန်းကျောင်း
ကွန်ဖူး နဲ့ ဘောလုံးကစားမယ် ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် Shaolin Soccer ဘောလုံး ဟာသ ရုပ်ရှင်ကို ဘောလုံးချစ် ပရိသတ် အားလုံး ကြည့်ဖူးကြမှာပါ ။
အခု ဒီစိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်သူတွေ ရှိလာခဲ့ ပါပြီ ။
သူတို့ ကတော့ ခါဘစ် နူမာဂိုမီဒေါ့ နဲ့ ကလဲရင့် ဆေးဒေါ့ဖ် တို့ ပါပဲ ။
UFC ရဲ့ ရှုံးပွဲ မရှိ ချန်ပီယံဟောင်းကြီး နဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဘောလုံးမာစတာ တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ အရည်အသွေးတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ကွန်ဖူးနဲ့ဘောလုံး ကစားမယ့် စိတ်ကူးကို စတင် အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီသင်တန်းကျောင်းကို The Seedorf Khabib Performance Club လို့ အမည်ပေးထားပြီး ဒူဘိုင်းမှာ အခြေစိုက် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ကြောင်း ယမန်နေ့က ကြေညာ အသိပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီသင်တန်းကြောင်းကို နောင် ၅ နှစ် အတွင်း ကမ္ဘာ အနှံ့ နေရာ ၁၀ ခု မှာ ဖွင့်လှစ် နိုင်ဖို့ အထိ ရည်မှန်းထားကြောင်း ဖွင့်ပွဲ ကို တက်ရောက် လာတဲ့ ခါဘစ် နဲ့ ဆေးဒေါ့ဖ် တို့က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
သူတို့ ၂ ဦးဟာ SK Sports Holding Company ကိုလည်း အတူ ပူးတွဲ တည်ထောင်လိုက်ကြပြီး ယူအေအီး နိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ မြို့ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ အဘူဒါဘီ နဲ့ ဒူဘိုင်း တို့မှာ ရုံးတွေ ဖွင့်လှစ် သွားကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ က ဆေးဒေါ့ဖ် ရဲ့ ပြောဆိုမှု အရ သူ နဲ့ ခါဘစ် တို့ဟာ ၂၀၂၀ အတွင်းက ဆုံတွေ့ ခဲ့ကြပြီး ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်လာခဲ့ ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူအေအီး ကို မကြာခဏ လာရောက်လေ့ ရှိတဲ့ ခါဘစ် ဟာ ကိုယ်ခံပညာ နဲ့ ဘောလုံး အားကစားကို ပေါင်းစပ် ထားတဲ့ သင်တန်းကျောင်း တခုကို ဖွင့်လှစ်ဖို့ စိတ်ကူး ရှိကြောင်း ဆေးဒေါ့ဖ် နဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး SK Sports Holding ကို တည်ထောင်ဖို့ အစပြု ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆေးဒေါ့ဖ် က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“ကျွန်တော်တို့ ၂ ယောက်မှာ တူညီတဲ့ စိတ်ကူးတွေ ရှိကြပါတယ် ။
လူငယ် မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက် မတူကွဲပြားတဲ့ အရာ တခုကို ပြန်ပေးဖို့ ၂ ယောက်စလုံး စိတ်အား ထက်သန်ခဲ့ကြတာပါ ။
ဒါက ဒူဘိုင်း ပရော်ဂျက် မဟုတ်ပါဘူး ၊ တကမ္ဘာလုံး အထိ ဖြန့်ကျက် သွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစား သွားမှာပါ ။
ခါဘစ် ဟာ MMA မှာ ဆရာတဆူပါ ၊ ကျွန်တော် ကတော့ ဘောလုံးဘက်မှာ အတွေ့အကြုံ နဲ့ ပညာတွေ အများကြီး ရခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒီ ၂ ခု ကို ပေါင်းစပ်ပြီး အရင်ကနဲ့ မတူတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင်ကြားသွားမှာပါ” လို့ ဆေးဒေါ့ဖ် က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ခါဘစ် ကလည်း “ကလဲရင့် က သူ့ အားကစားနည်း ( ဘောလုံး ) မှာ အောင်မြင်ခဲ့သူပါ ၊ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့ဘက် ( MMA ) မှာ အောင်မြင်ခဲ့ ပါတယ် ။
၂ ယောက်စလုံးက ချန်ပီယံတွေပါ ၊ ချန်ပီယံ တယောက် ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကိုလည်း ကောင်းကောင်း သိကြပါတယ် ။
အခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ချန်ပီယံတွေကို မွေးထုတ်ပေးဖို့ပါ ။ ဒီလို မွေးထုတ်ပေးမယ့် စနစ် တခုကို ကလဲရင့် နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတူ ပူးပေါင်း ဖန်တီးသွားမှာပါ” လို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ခါဘစ် နူမာဂိုမီဒေါ့ ဟာ MMA ( Mixed Martial Art ) အားကစားနည်းရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ UFC ( Ultimate Fighting Championship ) ရဲ့ Icon တဦး ဖြစ်ပါတယ် ။
ရုရှသားကြီး ခါဘစ် ဟာ UFC မှာ ၂၉ ပွဲ ဆက်တိုက် ရှုံးပွဲ မရှိ ထိုးသတ်ကာ ချန်ပီယံဆု ကို အကြိမ်ကြိမ် ကာကွယ်ပြီး အနားယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကလဲရင့် ဆေးဒေါ့ဖ် ကတော့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် တဝိုက်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကွင်းလယ် ကစားသမားတွေ ထဲက တဦး အဖြစ် သတ်မှတ် ခံထားရတဲ့ ဘောလုံးသမား ဖြစ်ပါတယ် ။
ကြံ့ခိုင်မှု အပိုင်းမှာ စံပြုရလောက်သလို ဘောလုံး နည်းစနစ်လည်း ကြွယ်ဝတဲ့ နယ်သာလန်သားကြီး ဆေးဒေါ့ဖ် ဟာ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးသမား ဘ၀ အချိန် အတော်များများကို အေစီမီလန် နဲ့ ကုန်ဆုံး စေခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီကနေ့ အထိ ဆေးလ်ဒေါ့ဖ် ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကို မတူညီတဲ့ ကလပ် ၃ ခု ( အိုင်ယက်စ် ၊ ရီးရဲမက်ဒရစ် ၊ အေစီမီလန် ) နဲ့ ရယူဖူးတဲ့ တဦးတည်းသော ဘောလုံး သမား အဖြစ်လည်း ရပ်တည် နေခဲ့ ပါတယ် ။
ခါဘစ် နဲ့ ဆေးဒေါ့ဖ် တို့ ရဲ့ ကိုယ်ခံပညာ နဲ့ ဘောလုံး ပေါင်းစပ် ထားတဲ့ သင်တန်းကျောင်း ကနေ ဘယ်လို အားကစားသမားတွေ ထွက်ပေါ် လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြပါစို့ဗျာ . . .
Previous Article လန်ဒန်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ ကွန်တီ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် လွဲမယ့် ယူနိုက်တက် ခံစစ်မှူး ၊ စိတ်မကောင်းစရာ အဂွေရို တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article VAR အပေါ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် စပါယ်ရှယ် Ban နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့် ဘရာဇီး ကလပ်